Marina fanondranana-nahoana no ilaina-ny Ellicott Dredges
Inona no atao hoe Marina Dredging?
Ny fitrandrahana ny Marina dia mitazona ny halalin'ny fantsona ao anaty marina ary tena ilaina amin'ny sambo toy ny yachts, ferry, serivisy vonjy maika, ary ireo sambo tsy miankina mitaingina marina. Ny fitrandrahana marina tsy miovaova dia miantoka ny fandehanana azo antoka ho an'ireo mpandeha an-tsambo na ao anatiny na ao ivelan'ny marina, mitazona ny marina hiasa amin'ny halavany faran'ny taona, ary miaro ny tontolo iainana.
Ny ankamaroan'ireo marinas dia eo amoron-drano a river, akaikin'ny a farihy, na any amin'ny faritra amoron-tsiraka amoron-tsiraka. Ny marinas dia toeram-pialofana azo antoka ho an'ny tompona sambo, mpandraharaha ara-barotra ary orinasan-tsamban-tsambo izay mitady hiaro ny sambon'izy ireo amin'ny rivotra mifofofofo sy onja misamboaravoara. Rehefa mandeha ny fotoana dia miangona manerana ny marina ny fotaka, ny fasika sy ny antsanga vokatry ny onjan-drano miadana, izay mahatonga ny sambo hidina anaty, manimba ny vatan'ny sambo ary mametra ny fahafahan'ny sambo hitety ny marina. Raha tokony tsy hiraharaha ilay olana izy dia zava-dehibe ny hiasan'ny tompona marina haingana kokoa fa tsy ny aoriana.
Manampy amin'ny fanatsarana ny halalin'ny fantsom-pifandraisana amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo singa voajanahary manangona ao anaty lalànan'ny marina. Ireo fitaovana voaangona ao amin'ny marina mandritra ny fizotran'ny dredging dia matetika ampiasaina amin'ny famenoana ireo torapasika eo an-toerana.
Inona no fiantraikany manan-kery eo amin'ny fandraharahana?
Nandritra izay taona maro lasa izay dia nahita marinasan'ny toeram-pivarotana tsy miankina sy tsy miankina mitombo isa izahay izay mipoitra izay manolotra fiantsenana tsy miato amin'ny mpandeha rano mahazatra. Ireo fotodrafitrasa manara-penitra ireo dia manome trano misy kintana efatra, fisakafoanana tsara, fantson-tsambo lehibe kokoa, serivisy amin'ny antsipirihan'ny yacht, ary tobin-tsolika mpitrandraka solika izay mitentina an-tapitrisany dolara isan-taona ho an'ny tompona marina sy mpandraharaha.
Na izany aza, ny potipoti-javatra toy ny antsanga dia fantatra fa miangona mandritra ny fotoana mandeha manerana ny marina ka manahirana na saika tsy afaka hanaisotra ny sambony avy eo am-pototra. Ny fananana programa fikojakojana dredge tsy tapaka dia zava-dehibe amin'ny tompona marina sy ny mpanjifa tompoin'izy ireo. Raha tsy izany dia voatery manidy slip-sambo ny tompona marina ary mitondra ny orinasany any an-kafa ny mpanjifa tsy faly.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny dredging marina dia ahitana ny fidiram-bola fanampiny azo avy amina boatin'ireo sambo ho an'ny sambo kely sy lehibe kokoa.
Toy ny ezaka mahomby rehetra, ny mpanjifa nahafa-po dia hiafara amin'ny fanambinana miroborobo.
Ankoatry ny fanatsarana ny fivezivezena dia zava-dehibe koa ny fanovozana rano amin'ny fihazonana marina azo antoka tontolo iainana. Ny fitrandrahana fikojakojana matetika dia fantatra ihany koa fa manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny rano sy ny tontolo iainana. Ny marina marina dredged dia mampihena ny mety hisian'ny propeller sambo manelingelina ny fanambanin'ny ranomasina sy manaloka ny rano.
Ny fitaovana voaangona aorian'ny fandatsahan-drano dia tokony hokarakaraina amin'ny fomba tsy manimba ny tontolo iainana. Misy safidy marobe azon'ny tompon'ny Marina sy ny mpikirakira rehefa mifehy fitaovana maditra ao anatin'izany ny famaahana misokatra, ny toerana fametrahana fitaovana maloto, ny fanamainana mekanika ary ny fampiasana fantsona dewatering.
Ny iray amin'ireo tombony ara-tontolo iainana amin'ny fananana dredge dia misy ny fahafahan'ny mpandraharaha marina mamaritra ny hafainganan'ny famokarana dredge, mamela ny dredge hiasa amin'ny ambaratonga miadana kokoa. Manakana ny fitaovana tsy hikoriana mankany amin'ny marinas izay hita akaikin'ny renirano izay mety hitranga izany rehefa mampiasa mpandraharaha.
Ny karazana mety amin'ny fitaovana fanondranana Marina
Ny fanapaha-kevitra hividy dredge na hampiditra mpandraharaha dia azo antoka fa hiankina amin'ny habe, ny toerana ary ny fampiharana ny marina. Raha manadoka ny marina isan-taona ianao, dia tokony hividy dredge mba hisorohana ny vidin'ny fanentanana sy ny fanaparitahana olona hatrany. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fisafidianana ny dredge mety dia mifandraisa amin'ny ekipanay ao sales@dredge.com na ny antso + 1-410-625-0808.